DEG DEG: Askari Katirsan Al Shabaab oo damacsanaa inuu dil ka geysto Madaxtooada Soomaaliya oo gacangta lagu dhigay iyo shaqsiga uu dili rabay oo la ogaaday - Allbanaadir Media | Allbanaadir Media
DEG DEG: Askari Katirsan Al Shabaab oo damacsanaa inuu dil ka geysto Madaxtooada Soomaaliya oo gacangta lagu dhigay iyo shaqsiga uu dili rabay oo la ogaaday
Ciidamada ilaalada Madaxtooyada ee loo yaqaano Koofi Gaduud ayaa gacanta ku dhigay xubin ka tirsan Al-Shabaab,kaas oo doonayay inuu dil ka geysto agagaarka Madaxtooyada Soomaaliya.
Madaxtooyada Soomaaliya oo si weyn loo ilaaliyo ayuu askariga ka tirsan Al-Shabaab si xoog leh uga soo gudbiyay Barta Kontarool ee Xaawo Taako halkaasi oo ku dhow Hooyooyinka .
Ninkan oo ku hubeysan Bastoolad ayaa askarta ilaalada Madaxtooyada waxay ku amreen inuu dhigo,islamarkaana wuxuu carar ku galay daarta Hooyooyinka oo markii dambe laga soo qabtay.
Warar aan heleyno ayaa sheegaya in nin ninkaan markiisii hore ka tirsanaa ciidmada ilaalada Madaxtooyada waxaana la waayay muddo sanad ka hor ah isaga iyo Askari kale. Markaas waxaa soo baxayay warar sheegaya in ay u galeen Al-Shabaab ama Daacish.
Hadda waxa uu maalmo ka hor soo dagay guri u dhow Maktabadii hore ee Qaranka, waxaana soo damiintay qof mas’uul sare ah oo ka tirsan Dowladda Soomaaliya sida uu sheegay Askari kale oo la daganaa qolka ninkaan Al-Shabaabka ah ee la qabtay.
Askarigaan xogta dhiibay ayaa la qabtay isagana kadib markii uu soo daba-kacay ninka la qabtay islamarkaana sheegay in uu ka soo qaatay Bastoolad isagoo hurdaya maadaama ay hal qol wada-daganaayeen.
“Ninka kale ee la qabtay waxa uu sheegay in uu daba joogay Bastooladiisa oo laga soo xaday waxa uu dalbanayey in CID iyo meel kasta la geeyo nin dhiiran ayuu ahaa cabsi ma qabin sida kale “ ayuu yiri qof xog badan ka hayay ninka la qabtay oo ku sugnaa dhismaha Hooyooyinka markii la qabanayey ragaan hubeysan.